Tombony sy fatiantoka valves isan-karazany - China Like Valve (Tianjin)
Tombony sy fatiantoka valves isan-karazany
1. Valizy vavahady vavahady: vavahady vavahady dia manondro ny valva ahetsiketsiky ny mpikambana mihidy (RAM) mankany amin'ny lalana mitsangana amin'ny axis fantsona. Ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny fantsom-panafody izy io, izany hoe misokatra tanteraka na mihidy. Amin'ny ankapobeny, ny valves amin'ny vavahady dia tsy ampiasaina amin'ny fandaminana ny fikorianany. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tsindry ambany na hafanana ambony ary fanerena avo, ary azo atao amin'ny akora hafa amin'ny valizy. Saingy ny valizy vavahady dia matetika tsy ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana mampita fotaka sy media hafa
① Kely ny fanoherana ny tsiranoka;
② Ny tselika ilaina amin'ny fanokafana sy ny fanidiana dia kely;
③ Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisan'ny tamba-jotra miaraka amin'ny mpanelanelana mivezivezy amin'ny lafiny roa, izany hoe tsy voafetra ny tari-dalan'ny mpanelanelana;
④ Rehefa misokatra tanteraka dia kely kokoa ny fikaohon'ny famehezana amin'ny alàlan'ny fitaovana miasa raha oharina amin'ny valantsara fijanonana;
⑤ Tsotra ny firafitry ny vatana ary tsara kokoa ny teknolojia famokarana;
⑥ Ny halavan'ny firafitra dia fohy kokoa.
① Ny refy ivelany sy ny haavon'ny fisokafana dia lehibe, ary ny habaka fametrahana azy dia lehibe koa;
② Amin'ny dingan'ny fanokafana sy ny fanidiana azy dia somary misy fikorontanana ny velaran'ny famehezana, ary lehibe ny fikororohana, na dia mora aza ny miteraka fisehoan-jaza amin'ny hafanana avo;
③ Amin'ny ankapobeny, ny valves am-bavahady dia misy habaka famehezana roa, izay manampy fahasahiranana amin'ny fikirakirana, fikolokoloana ary fikojakojana;
④ Ny fotoana fanokafana sy ny famaranana dia lava.
2. Valizy lolo dia valva iray izay mampiasa faritra fanokafana sy fikatonan'ny karazana kapila hivadika sy miverina eo amin'ny 90 ° hanokatra, hanidy ary hanitsiana ny lalan-tsiranoka.
① Izy io dia manana firafitra tsotra, volavola kely, lanja maivana ary fanjifana ambany, ary tsy ampiasaina amin'ny valizy caliber lehibe;
② Haingana ny fanokafana sy ny fanidiana ary kely ny fanoherana mikoriana;
③ Izy io dia azo ampiasaina amin'ny antonony miaraka amin'ny sombin-javatra matevina mihantona, ary azo ampiasaina amin'ny haino aman-jery vovoka sy granular arakaraka ny tanjaky ny famehezana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanokafana sy fanidiana ny lalan-drivotra sy ny fantsona fanesorana vovoka amin'ny lafiny roa ary ampiasaina betsaka amin'ny fantsom-panafody sy ny lalan'ny metallurgy, ny indostrian'ny hazavana, ny rafitra herinaratra ary ny petrochemical.
① Tsy dia lehibe ny fari-dalàna mifehy ny onja, rehefa mahatratra 30% ny fisokafana, hiditra mihoatra ny 95% ny fikorianana;
② Noho ny fetran'ny firafitry ny valizy lolo sy ny famehezana dia tsy mety amin'ny rafitra fantsom-panafana avo lenta sy avo lenta izy io. Ny mari-pana miasa amin'ny ankapobeny dia ambanin'ny 300 ℃ sy PN40;
③ Ny fampisehoana famehezana dia ratsy raha ampitahaina amin'ny valizy sy ny valizy mijanona, noho izany dia tsy dia avo loatra amin'ny famehezana.
3. Ball valves : mivoatra avy amin'ny valizy plug. Ny ampahany manokatra sy manidy azy dia sehatra iray, izay azo sokafana sy mihidy amin'ny alàlan'ny fihodinana ny baolina 90 ° manodidina ny axis-n'ny fotony. Ball Valve dia ampiasaina amin'ny fantsom-pandrefesana indrindra hanapahana, hizarana ary hanovana ny fitarihan'ny mpanelanelana. Ny valizy natao ho fanokafana miendrika V dia manana fiasa mifehy tsara koa.
① Ny fanoherana ny fikorianana dia ambany indrindra (raha ny tena izy 0);
② Azo ampiasaina amin'ny ranon-dronono manimba sy malefaka izy io satria tsy hianjera amin'ny asany (rehefa tsy misy menaka manitra);
③ Amin'ny haben'ny tsindry sy ny mari-pana dia azo tanterahina tanteraka ny famehezana;
④ Afaka mahatsapa ny fisokafana sy ny fanidiana haingana izy, ary ny fotoana fanokafana sy ny fanidiana ny rafitra sasany dia 0.05-0.1s fotsiny, mba hahazoana antoka fa azo ampiasaina amin'ny rafitra automatique an'ny dabilio fanandramana. Rehefa sokafana sy mihidy haingana ny valizy dia tsy misy fiantraikany ny fandidiana;
⑤ Ny faritra fanidiana baolina dia azo alefa ho azy eo amin'ny toeran'ny fetra;
⑥ Ny medium miasa dia voaisy tombo-kase azo antoka amin'ny lafiny roa;
⑦ Rehefa misokatra tanteraka sy mihidy tanteraka izy, dia misaraka amin'ny mpanelanelana ny velaran'ny famehezana ny baolina sy ny seza, noho izany ny fampitaovana mandalo amin'ny valva amin'ny hafainganam-pandeha dia tsy hiteraka fikaohon'ny velarana famehezana;
⑧ Izy io dia raisina ho toy ny rafitra valizy mirindra indrindra ho an'ny rafitra antonony antonony ambany noho ny firafiny mifamatotra sy ny lanjany maivana;
⑨ Ny vatan'ny valizy dia simetika, indrindra ny firafitry ny vatan'ny valantsara, izay mahazaka tsara ny fihenjanana amin'ny fantsona;
⑩ Ireo faritra mihidy dia mahazaka ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry ambony rehefa mihidy. (11) volo baolina misy vatan'ny valizy feno vy azo alevina ao ambanin'ny tany, izay mahatonga ny valizy ao anatiny tsy ho afaka amin'ny harafesina, ary ny androm-piainan'ny asa fanompoana mety hahatratra 30 taona, izay ny valizy tsara indrindra ho an'ny fantsona solika sy gazy voajanahary.
① Satria ny peratra fametahana tombo-kase an'ny seza valizy dia ny polytetrafluoroethylene, tsy mitongilana amin'ny akora simika rehetra izy io, ary manana ny toetran'ny coefficient kely amin'ny fikorontanana, ny fahombiazany, tsy mora ny fahanterana, ny fampiharana maripana marobe ary ny fahombiazan'ny famehezana tena tsara. Saingy ny toetra ara-batana amin'ny polytetrafluoroethylene, ao anatin'izany ny coefficient fanitarana avo lenta, ny fahatsapana ny fikorianan'ny hatsiaka ary ny tsy fahampian'ny fitondra hafanana, dia mila ny famolavolana tombo-kase amin'ny manodidina ireo toetra ireo. Noho izany, rehefa lasa mafy ny fametahana tombo-kase, dia simba ny fahatokisana ny tombo-kase. Ankoatr'izay, ny fanoherana ny mari-pana amin'ny polytetrafluoroethylene dia ambany ary tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny latsaky ny 180 ℃. Ambonin'ity maripana ity dia hihantitra ny fitaovana famehezana. Fa raha dinihina ny fampiasana maharitra, dia amin'ny 120 ℃ ihany no hampiasana azy.
② Ny fahombiazan'ny fandrindrana azy dia ratsy kokoa noho ny an'ny valizy mijanona, indrindra ny valizy pneumatika (na valizy elektrika).
4. Vato fijanonana : manondro ny valva izay mihetsiketsika ny mpikambana mihidy (kapila) manaraka ny tsipika afovoan'ny seza. Araka ny fivezivezan'ny kapila, ny fiovan'ny fisokafan'ny seza valizy dia mifanaraka amin'ny kapoka kapila. Satria fohy ny famohana na famaranana ny vodin-tsivana, ary manana fijanonana tapaka azo antoka izy io, ary satria ny fiovan'ny fisokafan'ny seza valizy dia mifanitsy amin'ny lozan'ny kapilan'ny valizy, dia mety indrindra ho an'ny mifehy ny fikorianany. Noho izany, ity karazana valizy ity dia mihetsika be mba hiara-hiasa amin'ny fanapahana na ny fifehezana ary ny famonoana.
① Amin'ny dingan'ny fanokafana sy ny fanidiana azy dia kely kokoa noho ny valin'ny vavahady ny elanelana misy eo amin'ny kapila sy ny faritra misy famehezana ny vatan'ny vavahady, noho izany dia mahazaka akanjo izy.
② Ny haavon'ny fanokafana dia 1/4 fotsiny amin'ny fantson'ny seza valizy, noho izany dia kely kokoa noho ny vavahady vavahady izy io;
③ Amin'ny ankapobeny dia iray ihany ny famehezana eo amin'ny vatan'ny valizy sy ny kapila, noho izany ny fizotran'ny famokarana dia tsara kokoa sy mora tazonina;
④ Satria mifangaro asbestos sy grafita ny mpanenika dia avo kokoa ny fanoherana ny maripana. Amin'ny ankapobeny, valve stop no ampiasaina amin'ny valves etona.
① Satria miova ny làlan'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny valva, ny fanoherana faran'izay kely indrindra amin'ny valizy mijanona dia ambony noho ny an'ny ankamaroan'ny karazana valves hafa;
② Noho ny fahatapahana lava, ny hafainganam-pandeha dia miadana kokoa noho ny valin'ny baolitra.
5. plug : enti-milaza valizy mihodina misy faritra fanidiana plunger. Amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny 90 °, ny seranana amin'ny fantsom-pandrefesana dia mifamatotra na misaraka amin'ny seranan-tseranana amin'ny vatan'ny valva, mba hahatsapana fa manokatra na mihidy. Ny plug dia mety amin'ny endrika varingarina na conical. Ny fotokevitra dia mitovy amin'ny valin'ny baolina. Ball Valve dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny valizy plug, izay ampiasaina indrindra amin'ny fitrandrahana solika sy indostrian'ny petrochemical.
6. Valan-tseranana : entina ilazana ny fitaovana fiarovana mahery vaika amin'ny sambo fanerena, fitaovana na fantsona. Rehefa miakatra mihoatra ny sandam-bola azo avela ny tsindry amin'ny fitaovana, sambo na fantsona dia hisokatra ho azy ny valizy ary avy eo esorina amin'ny habetsany feno hisorohana ny fitaovana, sambo na fantsona ary tsindry tsy hiakatra hatrany; rehefa milatsaka amin'ny sanda voafaritra ny tsindry dia hikatona ho azy sy mandeha ara-potoana ny valizy mba hiarovana ny fiasan'ny fitaovana, sambo na fantsona azo antoka.
7. Fandrika etona: eo amin'ny mpanelanelana amin'ny etona sy ny rivotra voafatotra, dia hisy condensate sasany hatsangana. Mba hiantohana ny fahombiazana sy ny fiasan'ny fitaovana azo antoka, ireo haino aman-jery tsy misy dikany sy manimba ireo dia tokony havoaka ara-potoana mba hiantohana ny fihinanana sy ny fampiasana ilay fitaovana. Manana ireto asany manaraka ireto izy: ① afaka manala haingana ny condensate vokarina izy; ② misoroka ny famoahana etona; ③ mandany rivotra sy gazy hafa tsy milefitra.
8. Valizy mampihena ny tsindry : valizy io izay mampihena ny tsindry fidirana amin'ny tsindry famoahana takiana sasany amin'ny alàlan'ny fanitsiana, ary miankina amin'ny herin'ny mpanelanelana mihitsy mba hitazomana ny tsindry fivoahana ho azy.
9. Jereo valve fanoherana, fantsom-pandrefesana, valin'ny tsindry miverina ary valizy tokana. Ireo valva ireo dia sokafana avy hatrany ary akatona amin'ny alàlan'ny hery ateraky ny fivezivezin'ny fantsom-pantson-tanana, ary an'ny valizy mandeha ho azy. Ny valizy manamarina dia ampiasaina amin'ny rafitra fantsona, ny asany lehibe indrindra dia ny fisorohana ny fihemorana antonony, hisorohana ny paompy sy ny motera tsy hivadika, ary ny famoahana ny mpanelanelana amin'ny kaontenera. Ny valizy manamarina dia azo ampiasaina ihany koa mba hanomezana ny rafitra mpanampy amin'ny tsindry ambonin'ny tsindry rafitra. Azo zaraina ho karazana swing (mihodina arakaraka ny afovoan'ny hery misintona) sy ny karazana manainga (mihetsika manaraka ny axis).
Tombony sy fatiantoka ny v ...
Tatitra: mifandray vaovao ny mekanika vaovao ...